Blogs, Clogs and Storytelling | Martech Zone
Blogs, Clogs ary fitantarana
Asabotsy, Aogositra 12, 2006 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Brian Clark dia nanohina zavatra tamin'ny mpivady farany Lahatsoratra ao amin'ny copyblogger izay heveriko fa mety ho 'rohy tsy hita' ho an'ny Blogs Corporate (manentsina)… Tantarao ny Tantara.
Nanoratra mpivady aho Lahatsoratra izay manakiana ny bilaogin'ny orinasa. Ny antony dia mety ho oxymoron ny bilaogy orinasa iray. Orinasa maro no mijery ny fitorahana bilaogy ho toy ny fanitarana ny ezak'izy ireo amin'ny marketing, miaraka amin'ny tranokala, dokam-barotra ary fanambarana an-gazety. Ny orinasa hafa dia miakatra an-tsambo amin'ity 'medium marketing vaovao' ity. Arrgh! IMHO, ny bilaogy dia tsy natao ho an'ny marketing, fa tena natao hamoronana resadresaka nifanaovana tamin'ny mpamaky anao - ny mpiasa, ny mpanjifa ary / na ny vinavina.
Ny torohevitra nomen'i Brian tamin'ny fidirany farany mpivady dia ny hoe tena mandaitra ny mitantara tantara amin'ny kopianao, ary azo itarina amin'ny bilaoginao izany. Hevitra mahafinaritra tokoa izany! Tokony hampiasa an'io paikady io ny orinasa. Ny tantara dia mety ho marin-toetra, mifandraika ary ara-potoana. Ny tantara iray dia afaka maneho ny tanjaky ny orinasanao raha tsy misy ny doka amin'ny doka-teny na fanambarana an-gazety. Ary… ny tantara dia mety ho fiandohanà resaka mampivadi-po eo amin'ny orinasanao sy ireo olona mamaky ny bilaoginao.
Ny fitantarana tantara dia mety ho tetika mety indrindra ho an'ny orinasanao bilaogy, fanalavirana ny valin-kasasaran'ireo tsy marim-pototra ary nekena mialoha manentsina.
Lazao ny tantaranao. Lazao ny tantaran'ny mpanjifanao. Na dia mitantara ny tantaran'ny fanantenanao aza.
Analytics amin'ny kajy fandoavana karama
Jul 21, 2007 amin'ny 7: 05 AM
indrisy fa izany no dingana manaraka hataoko amin'ny fanaovana bilaogy…. ary miloka vola be amin'izany 😛. manantena aho fa mendrika ny ezakako io….